सुरुभयो सच्चा र सही आन्दोलन
टोलटोल, सहर सहरबाट आमनागरिकको संविधान खारेज गर्ने माँगसहित नारा जुलुस निस्किरहेका छन्, तैपनि प्रहरी प्रशासन मौन छ, किन होला ? हिजोका माओवादीले पेल्दै लगेकाले संघीयताविरोधी प्रधानमन्त्री नै यो व्यवस्थाको बिरोधमा लागेका त होइनन् ? सरकार मोन बस्नु रहस्यमय मानिएको छ ।
यो पृथकतावादी आन्दोलन होइन, सैद्धान्तिक आन्दोलन हो । प्रत्येक नाराबाजी र जुलुसमा राजतन्त्रसहितको लोकतन्त्रको आवाज उठिरहेको छ । यसरी आवाज उठाउनेहरुले नेपालको झण्डा बोकेका छन् ।
केही अन्ध गणतन्त्रवादीहरु ओली सरकारको आलोचना गरिरहेका छन् । यत्रो बलिदानबाट आएको गणतान्त्रिक व्यवस्थाका विरुद्धमा यसरी खुला बिरोध गर्ने छुट दिन कहाँ पाइन्छ र ?
यथार्थ के हो भने देशका ७७ जिल्लाकै गाउँटोल आक्रोसित छ, सबैको एउटै माँग छ– राजा आउ देश बचाउ । गणतन्त्र खारेज गर ।
यसरी आवाज उठ्दा मुटु कमजोर भएका प्रजातन्त्रबादी भनाउँदाहरुको सातो उठिसकेको छ । जुलुस निस्किरहेका छन्, ¥याली भइरहेका छन्, तर शान्तिपूर्ण । कतै पनि तोडफोड, ढुंगामुडा केही भएको छैन । मात्र नारा लागेको छ, राजतन्त्र जिन्दावाद । यो जुलुस भनेको माउरीको गोला हो, यसलाई चलायो भने भाग्ने बाटो पनि पाइन्न भन्ने सरकारमा बस्नेहरुले बुझेका छन् ।
वास्तवमा गणतन्त्त, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता जनतालाई झुक्याएर लादिएको हो । राजतन्त्र निरंकूश छ, सबै समस्याको जड हो भनेर विदेशीको सहयोग लिदै निरंकूशता हटाउने नाममा राजतन्त्र नै फालेका हुन् । भन्नुपर्दैन, अव नेपाली जनताले बाघको छाला ओढेका ब्वाँसाहरुको पहिचान गरिसकेका छन् । अहिले राजधानीलगायत नेपालभरि जसरी जनजुलुस निस्किरहेका छन्, त्यसमा सामेल हुनेहरुमा कांग्रेस, नेकपा, जसपा, जनमोर्चा, राप्रपालगायतका सबै खाले युवाहरु बढी छन् । यो वास्तवमा आगोको झिल्कोको रुपमा देखिएको छ । नजिक गए पोल्छ, चलाउन गए डढाउँछ । त्यसकारण व्यवस्था पक्षधरहरुले धेरै नउफ्रिए हुन्छ । करिव १५ वर्ष समय पाए, गणतन्त्रवादीहरुले ।
८ वर्षे संविधानसभादेखि पछिल्लो आवधिक चुनावसम्म संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचनमा घोषणापत्र पल्टाएर पढौं त ? कति राम्रा राम्रा शव्द छन्, आश्वासनहरु छन् । नेपाललाई स्वर्ग बनाउने कथा लेखिएका छन् । राजनीतिक क्रान्ति पूरा भयो, अव आर्थिक क्रान्ति र विकासक्रान्ति सुरु भयो भनिएको छ । जनताले पनि एकपल्ट हेरौं न त भनेर यिनलाई साथ दिदै आएका पनि हुन् । गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता मात्रै होइन, बहुमत र दुईतिहाइसमेत दिए । तर नतिजा के आयो खोई ? उही नैतिकहीनता, भ्रष्टाचार र अपराधको बढोत्तरी । जनताप्रति कुनै नेता वा पार्टीले हेर्दै हेरेनन् ।
हिजोका दिनमा सांसदको लिलामी हुन्थ्यो, अहिले बहुमत भएको दलले देशकै लिलामी गरिरहेको छ । मुलुक नै सिध्याउन भए । बरु हिजो जेमन्त कम थियो, बहुमतले त जेमन्त गरिरहेकै छ । सिंहदरवारमा हुने भ्रष्टाचार गाउँपालिकासम्म फैलिएको छ । जवाफदेहीता कसैमा छैन । राष्ट्रपतिसमेत केपी ओली कित्ताको देखिन्छिन् । नेपाली जनता अभिभावकविहीन भएका छन् । विदेशी दूतहरु एकथरि बहुमतवाला पार्टीमा झगडा गराउने, अर्काथरि मिलाउन नाङ्गिएर लाग्ने, जो पदमा छन्, शक्तिशाली छन्, उनीहरुको ध्याउन्ना नै लुट्नेमात्र । अचम्म त के छ भने एउटा नुहाउने सावुनको ३८ सय मूल्य असुल्न सक्ने पद्धति कति भ्रष्टाचारी होला ? नेताहरु कतिसम्म लज्जाहीन होलान् ?
वाइडबडी जहाज खरिद, एनसेललाई छुट, ओम्नी, यति, समार्गी, दुर्गा प्रसाई, गोकुल बास्कोटा, स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा अरवभन्दा बढी बढी भ्रष्टाचार भएका छन् । मुलुक र जनतामाथि यतिसम्मको घोर अन्याय । ज्यादति । कतिञ्जेल सहने जनताले । अनि जनता जागेका हुन्– राजा आउ देश बचाउ भनेर । यो जनउभार नेपालीपन र नेपाली जनताले आफै ल्याइरहेछन् ।
अव जनतालाई नेकपा, कांग्रेस वा अरु पार्टीभित्रको द्वन्द्वको मतलव भएन । चिन्तकहरु भन्छन्– आधुनिक नेपालमा पहिलोचोटी हरेक पार्टीका नेता, कार्यकर्ताहरु आजित भएर राजा आउ देश बचाउ नारामा समर्थन, सहयोग र साथ दिइरहेका छन् । यसबाट थाहा हुन्छ– नेपालीले आँखा हेर्न थाले, विवेक लगाउन थाले । यो जनआन्दोलनले आकार लिन केही समय लाग्ला, तर जनता जागेका छन्, स्वतःस्फूर्त रुपमा जागेका छन् । गाउँ, टोल, सहर सहरबाट जागेका छन् । यो जनआँधी अव रोकिनेवाला छैन । नेपालमा लोकतान्त्रिक राजतन्त्र स्थापना गर्नबाट कसैले रोक्न सक्ने छाँट देखिदैन । जो हिजोका ठुला नेता थिए, तिनले जनविश्वास गुमाइसकेकाले पनि राजतन्त्रका सामु अव कुनै तगारो देखिदैन ।
अव जतिसुकै विदेशीले नेता मिलाउन्, झगडा सुल्टाउन्, लुट्न भागबण्डा गरेर आफै मिलुन्, नेपाली जनता रोकिनेवाला देखिदैनन् । यो हो सही अर्थमा क्रान्ति । अव हुन्छ नेपालमा सही परिवर्तन । अतिशयोक्ति नठाने हुन्छ, ०७, ०४६, ०६३ सालको परिवर्तन विदेशीको बुई चढेर भएका थिए, अवको परिवर्तन नेपाली आफैले ल्याउने छन् । साथ दिउँ, आफै परिवर्तन ल्याऔं ।